News | sleep
News | Tag: sleep
यस्ता छन् निद्रा लगाउने सजिलो उपायहरु
एजेन्सी । उमेरले २० वर्षको हाराहारीमा रहेको एक स्वस्थ व्यक्ति दिनमा आठ घण्टा सुत्नुपर्ने हुन्छ । तर, जति उमेर बढ्दै जान्छ त्यति निद्रा घट्दै जान्छ ।
यस कारण आठ घण्टा सुत्नुपर्छ !
काठमाडौं । एक अध्ययनका अनुसार दैनिक आठ घण्टाभन्दा कम सुत्ने मानिसमध्ये धेरैमा मानसिक तनाव एवम् निराशा (डप्रेसन)को समस्या देखिएको छ । आठ घण्टा भन्दा कम सुत्ने मानिसहरुमा चिन्ता, कुन्ठा, तनाव र निराशा धेरै आउने गरेको सो विश्वविद्यालयद्वारा प्रकाशित मेडिकल जर्नलको पछिल्लो संस्करणमा छापिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
एजेन्सी । उमेर र विभिन्न व्यक्तिको जीवनशैली अनुसार सुताईमा भर पर्छ । स्लिप हेल्थ जर्नलमा प्रकाशित अनुसार कुनै पनि व्यक्ति स्वस्थ रहन निम्म समय सुत्नुपर्छः
कुन उमेरको व्यक्ति कति घण्टा सुत्ने ?
एजेन्सी । कति घन्टा सुत्दा शरीरलाई उपर्युक्त हुन्छ ? यो उमेरमा भर पर्ने कुरा भएको अध्ययनकर्ताहरु बताउँछन् । व्यक्ति स्वस्थ रहन कति समय सुत्नुपर्छः
जसले तपाइलाई निद्रा जगाउन मद्दत गर्छ
निन्द्राबारे अनौठा कुराहरु
एजेन्सी । हाम्रो निन्द्रासँग रोचक रोचक तथ्यहरु जोडिएका छन् ।
यदी तपाइँलाई विहान उठ्न कठिन हुन्छ भने तपाइँलाई यी रोगको समस्या हुन सक्छ
मध्यरातमा निद्राबाट ब्युँझदा यी ५ काम गर्दै नगर्नुस्
तपाईलाई कतै राति निन्द्रा सम्बन्धि यस्तो समस्या त छैन ?